နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Hon. Jose de Venecia, Jr. နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Hon. Jose de Venecia, Jr. နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Hon. Jose de Venecia, Jr. နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: September 11, 2017 In: Appointment, ChairpersonNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Hon. Jose de Venecia အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် စီပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာကိစ္စ၊ International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) မူဘောင်အောက်မှ နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော် နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စများအား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးကျော်ဇေယျ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနှင့်အတူ ၎င်း၏ဇနီး အောက်လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း Hon. Gina de Venecia နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးတို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ အောကျလှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌဟောငျး Hon. Jose de Venecia, Jr. နှငျ့အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော စကျတငျဘာ ၈
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ အောကျလှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌဟောငျး Hon. Jose de Venecia အား ယနေ့ မှနျးလှဲ ၂နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး၏ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးနှငျ့ စီပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာကိစ်စ၊ International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) မူဘောငျ အောကျမှ နှဈနိုငျငံလှတျတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ကိစ်စမြားအား အမွငျခငျြး ဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးကြျောဇယြေ၊ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ အောကျလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌဟောငျးနှငျ့ အတူ ၎င်းငျး၏ဇနီး အောကျလှတျ တျောအမတျဟောငျး Hon. Gina de Venecia နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖိလဈပိုငျ သံအမတျကွီး တို့ တကျရောကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနှင့် တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးအခန်းကဏ္ဍ အစည်းအဝေးကျင်းပ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် International Panel on Climate Change ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနှင့် Energy Farm International Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Dr.R.K. Pachauri ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ